Abanye besifazane bacabanga ukuthi amadoda nokuthandana kukhona izinto ezimbili ezingahambisani. Nokho, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Iqiniso liwukuthi ukuthandana kwamadoda kunencazelo ehluke kakhulu kunabesifazane. Ngakho-ke abantu bayabheka ukuthandana? Abesifazane badinga ukuthatha isinyathelo ukuze indoda ibone inzwa yothando?
Umthetho 1. Ungalindeli noma udinga lutho ngokubuyisela
Isibonelo, ulungiselele isidlo esiphundu somuntu othandekayo, wakhonza kahle etafuleni , wadala ukukhanyisa okuhambisanayo, ukugqoka izingubo zokukhohlisa. Lapha kufika okhethiweyo wakho, waletha ushokoledi kanye nezimbali zezimbali. Uhlala phansi esidlweni sakusihlwa, ujabulele ukudla, unikane, ucabange. Konke kuhle, kusihlwa kungukuthandana, kodwa ngokuzumayo owesifazane uyasondela futhi uthi: "Ngithande, ngize ngihlanze izingubo."
Konke kulolu thando lomuntu sekuphelile. Uma ufuna ngempela ukunikeza ubusuku bakho obuthandayo obunothando, ulondoloze kusukela kulezizinto ezivamile zansuku zonke.
Umthetho 2. Thatha inhlangano yomcimbi
Inhlangano yokuhamba, i-picnics kanye nokuhamba ngokuvamile kuvame ngamadoda. Uma ngokungazelelwe uthathe yonke imisebenzi yenhlangano futhi wenze umthandi wakho amangaze njengosuku lokuzalwa, uhambo lokuya esikhwameni, njll, kuyoba yothando kakhulu. Wena wamnakekela, wathatha zonke izinkinga kuwe, futhi angabelana nawe ngenjabulo yalesi senzakalo. Lona uthando lwangempela.
Isigaba 3. Engeza amahlaya
Amadoda awajabuli ngokubonakaliswa ngothando, kodwa uma ufaka amahlaya amancane, kuzoba yinto ehlukile. Indlela ingaba yinoma yini, kusukela kumaswidi ngamanothi ahlekisayo, kuzipho ezifihliwe endaweni ethile, futhi ngaphambi kokuzithatha, udinga ukuxazulula le puzzle.
Umthetho 4. Ubulili nokuthandana kuhlala njalo
Ukufana nesimo somuntu ukuthi ubulili nokuthandana ekhanda labo zihlobene kakhulu. Ngakho-ke, noma yimiphi imizamo yakho embhedeni ngokuzenzakalelayo iba yothando. Akuyona nje ukuzijabulisa, kodwa i-adventure yothando. Ngenxa yalokho, usondelana komunye nomunye. Uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze kule ndlela, ke into elula ongayenza ibeka izingubo zangaphansi ezingokwemvelo (isibonelo, izingubo zangaphansi ezimnyama nezibomvu zibhekwa njengeziyingqayizivele). Ungacabanga ukuthi isinyathelo sokuqala sithathwe kakade.
Umthetho 5. Thola indawo yakhe ebuthakathaka
Lokhu kusho ukutholela lokho akuthandayo, lokho okuyisidakamizwa, futhi uyinike yona. Amadoda ahluke: omunye uthanda ibhola, omunye akakwazi ukubekezelela futhi uthanda ukufunda incwadi enhle, owesithathu uthanda ukuzilibazisa okwedlulele, njenge-skiing skiing, jumping parachute. Lokho owesifazane okufanele akwenze kubonisa ukuthi uyaqonda indoda futhi uyambonga, khona-ke lesi sigaba sizobe sisezinyaweni zakhe.
Kungani ngidinga umlingani wangaphambili?
Indlela esheshayo iklabishi elimuncu
Amakhukhi anamanothi nama cherry ama-maraschino
Ngiyajabula ukuthi umngane wephula nentombazane - ingabe lokhu kuvamile?
Ukudla okunomsoco nokuphephile komzimba
Indlela yokuhalalisela intombazane ngosuku lwe-Valentine's Day
U-Xenia Borodina waziqhenya ngokuphila okunethezeka
Imithetho yokuhlanzeka kwengane esanda kuzalwa